#GIS - Nidaamyada Macluumaadka Juquraafiyeed ee leh QGIS - Geofumadas
Baro sida loo isticmaalo QGIS iyada oo la adeegsanayo laylisyada layliga ah
Nidaamyada Macluumaadka Juquraafi ahaan iyadoo la adeegsanayo QGIS.
-Waxaad jimicsi kasta oo aad ku sameyn karto ArcGIS Pro, lagu sameeyay barnaamij bilaash ah.
-Waxaa loo dirayaa xogta CAD xogta GIS
-Kaabinta ku saleysan qaab-dhismeedka
-Xeerarka ku saleysan xeerarka
-Ka dhoofinta isku-xidhka Excel
Faylasha oo dhan waa la heli karaa si aad ugu dabaqi kartaan aqoonta aad heshay.
Waxa sameeyay khabiir, kor loogu hadlo, hal jawi shaqo oo si tartiib tartiib ah wax looga barto iyadoo la adeegsanayo habka AulaGEO
Koorsadani asal ahaan waxaa lagu dhisay Isbaanish, iyadoo la raacayo casharro la mid ah oo lagu qabtay koorsada caanka ah Baro ArcGIS Pro Easy! Waxaan u sameynay inaan muujino in waxaas oo dhan ay suurta gal tahay anagoo adeegsanayna barnaamij furan; had iyo jeer ku hadla afka Dabadeed, qaar ka mid ah adeegsadayaasha Ingiriisiga ayaa na weydiiyay, waxaan abuurnay nooc spanish ah oo koorsada ah; waana sababta ay sababta barnaamijka kumbuyuutarka ee kombuyuutarradu u dhexeeyo.
Post Previous«Previous #BIM - Naqshadeynta Birta ee Sare
Post Next #GIS - ArcGIS Pro iyo QGIS 3 koorso - oo ah isla howlahaNext »